Tababaraha shirkadda International express xamuulka hawada oogeen Express Turkey ee ugu sareeya (CEO), Claus Lassen, "Istanbul Airport've sameeyey 135 42 milyan oo maal-euro oo ay leeyihiin meel ka mid ah oo kun oo mitir oo laba jibbaaran." Waxa uu sheegay. International Express [More ...]
MIP, hawlwadeenka Mersin Port, wuxuu dhigay rikoor cusub howlgalka markabka kaas oo dhaqdhaqaaqa weelka xNUMX saacaddiiba lagu fulinayo. Mersin, oo guul weyn ka gaadhay 178, ayaa kaalinta koowaad gelisay muggeedii weelka. [More ...]
Meelaha dhulka hoostiisa mara ee xarunta tareenka ee Diyarbakır ayaan u egayn tunerooyinka naxdinta leh ee filimmada ku jira. Muwaadiniintu waxay ka baqayaan inay ka gudbaan saldhiga. Aaladaha laga dhisayo Diyarbakır TCDD Station waxaa lagu xukumay mugdi. Maalin walba boqolaal dad ah ayaa aada guryahooda [More ...]
Tareenka Safarka Tesaloniika ee Alexandroupolis waxaa ku gacan sayray Mandalas!
Tareenka ka yimid Tesaloniika ilaa Alexandroupoli waxaa ku dhacay shil xiiso leh Sabtidii. Waqooyiga Giriigga, tareenka samaynaya ololaha Tesaloniika-Alexandroupoli wuxuu ku dhuftay laba buffaloes. Dadka laga tirada badan yahay waxay soo wariyeen in shilku dhacay kadib, is-rasaaseynta [More ...]
TÜLOMSAŞ waxay sameyn doontaa shaqaaleyn shaqaaleyaal horey loo xukumay
Turkey tareenka iyo Engine Industry Corporation ka Agaasinka Guud: qandaraasle ayaa lagu sameyn doonaa Maxaabiis hore sida 2 Agaasinka Guud ee Posts qoranayaan shaqaalaha joogtada ah. ku dhawaaqay shuruudaha shaqaaleyn oo ay ku jiraan web Turkey Association Business [More ...]
RayHaber 26.08.2019 Warbixinta Shirka
Dhuumaha ayaa loo dhisi doonaa Saldhigyada Başkentray Dayactirka Waqtiga, Dayactirka iyo Howlgallada iyo Faragelinta haddii ay dhacdo Fashil Shaqo Köseköy Saldhig Adeegga Saadka Warehouse CCTV Nidaamka Qalabka Amniga Kaameerada Rakibaadda Shaqada
Waxaa la go'aamiyay Waqtiga Gawaarida Cable Pınarbaşı Aytepe Cable Gawaarida
Mowduuca jidka Pınarbaşı Aytepe, oo ay ku wareejisay dowladda hoose ee Aydın Magaalo-weyne wuxuu u wareegey dowladda hoose ee Efeler. Duqa magaalada Efeler Mehmet Fatih Atay, ayaa sheegay in fiilooyinka aan la adeegsan doonin khadka khadka fiilada tooska ah. [More ...]
Kaabayaasha dhaqaalaha waxaa loo sameyn doonaa Eminönü-Alibeyköy Tramway, oo kamid ah nidaamyada tareenka ee uu amray madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu. Atatürk Avenue-Yavuz Selim Bridge Junction [More ...]
Dawlada Hoose, oo saxeexday mashruucyo muhiim ah si İzmir looga dhigo “magaalada baaskiilka,, ayaa bilaabeysa codsi cusub. Laga bilaabo Agoosto iyo wixii ka dambeeya, 26 waxay awoodi doontaa inay ku raacdo basaska dadweynaha oo wata bushkuleeti isku laabma waqtiyo cayiman. [More ...]